बिहे त गर्छन् तर……स’म्बन्ध राख्दैनन्, कस्तो अचम्म ! – ramechhapkhabar.com
बिहे त गर्छन् तर……स’म्बन्ध राख्दैनन्, कस्तो अचम्म !
विवाहपूर्व यौ’न सम्बन्ध का’नुनी रुपमा प्र’तिबन्धित नभए पनि हामीकहाँ सामाजिक रुपमा भने यो कुरालाई असहज मानिन्छ । तर, जापान सरकारको अगाडि भने अर्को सं’कट आएको छ । यहाँ मानिसहरुले विवाह त गर्छन् तर यौ’न सम्बन्ध राख्दैनन् । जापानमा कैयौं विवाहित जोडीहरुले ‘से क्स फ्रि’ जीवन बिताइरहेका छन् । जापानमा कैयौं मानिसहरु यस्ता छन् जो जीवनभर अविवाहित रहन्छन् । हुन त अरु देशमा पनि आजीवन अविवाहित रहनेहरु छन् तर जापानमा यस्ता मानिसहरुको संख्या अन्यत्र भन्दा उच्च छ ।
त्यसमाथि विवाह गरेकाहरुले पनि यौ’न सम्बन्धबाट त’र्किन थालेपछि जापानमा जन्मदरमा लगातार गि’रावट आइरहेको छ । समाचार एजेन्सी डिपीएको रि’पोर्टअनुसार जापानमा यस्ता मानिसहरुको संख्या लगातार बढिरहेको छ जो जीवनभर सिंगल रहन चाहन्छन् । यही कारण जापानमा कूल जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको संख्या लगातार बढिरहेको छ ।
यो स्थिति निकै चि न्ता जनक हो र यसलाई जापान सरकारले पनि अहम सं’कटको रुपमा हेरिरहेको छ । यसबाट देशको अर्थतन्त्रमा पनि खरा’ब अ’सर परिरहेको छ । मे’रिको नामकी महिलाका अनुसार उनी आफ्नी एक मित्रका विषयमा चि’न्तित छिन् किनकि उनकी मित्र बच्चा चाहन्छिन् तर उनकी मित्रका पति भने यौ नस म्ब न्ध राख्नै चाहँदैनन् । मे’रिको आफैं पनि पति र बच्चा चाहन्छिन् तर यसको लागि उनले आफ्नो लागि उचित पति भेट्नै सकिरहेकी छैनन् ।
चुओ युनिभर्सिटीका प्रोफेसर मसाहिरो यामडाको अनुमान अनुसार जापानका करिब २५ प्रतिशत युवा सम्भवतः जीवनभर सिंगल रहनेछन् र कहिल्यै बिहे गर्ने छैनन् । रि’पोर्टका अनुसार पछिल्लो ३ दशकमा जापानमा सिंगल व्यक्तिहरुको संख्या धेरै बढेको छ । जापानमा पनि सामान्यतया महिलाले घरको काम हेर्ने र पुरुषले बाहिर कमाउने परम्परा चलिआएको छ ।
तर, देशको अर्थतन्त्र राम्रो नभएका कारण महिलाहरुले राम्रो कमाइ भएका पा’र्टनर पाउन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ देशमा कैयौं व्यक्ति यसकारण पनि सिंगल छन् किनकि अधिक कामका कारण उनीहरुसँग खाली समय नै रहँदैन ।
२०१५ मा थाहा भएको थियो कि १९९२ को तुलनामा देशमा २०१५ मा आइपुग्दा १८ देखि ३९ वर्ष उमेरका युवाहरुमा सिंगल महिलाको संख्या मात्र २२ लाख बढी भइसकेको थियो । त्यही अवधिमा सिंगल पुरुषहरुको संख्या १७ लाख बढेको थियो । अहिले जापानको कूल जनसंख्या करिब साढे १२ करोड छ ।
एक अध्ययनमा जापानमा हरेक ४ मध्ये एक महिला र हरेक ३ मध्ये एक पुरुष ३० वर्षभन्दा धेरै उमेर भइसक्दा पनि सिं गल भएको खुलासा भएको थियो । यीमध्ये आधालाई वैवाहिक स म्ब न्धमा रुचि थिएन । रि-पोर्टअनुसार जापानमा उमेर पुगेका तर भ र्जि न अर्थात कु मा रित्व नै नगु’माएका व्यक्तिहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ ।